Sidee Wajiga Haaraha Looga Nadiifiyaa? - Daryeel Magazine
Sidee Wajiga Haaraha Looga Nadiifiyaa?
Maanta waxaan raba inaan ka hadlo dhibatada ka haysta dumarka haaraha, kuwaasoo runtii hablo badani isoo waydiin waxa goyn kara, waxan jeclaysatay inaan u yar faahfaahiyo si ay oga faaiidaystaan dumarka oo dhan.
Hadaba haraahani waxay ku dhaacaan dumar ka uurka leh, dumarka aan uur lahayn iyo raga qaar, waxana loo yaqaana Harahan (melasma & the mask of pregnancy) kuwaasoo ka dhasha (melanin) oo ku badata jidhka, ka bacdina, cad ceedu dhibato soo gaadhsiiso jiidhka. Dumarka uurka leh way ka tagaan harahani markay umulan ka bacdi hadii anay wax khaldan marsan!
Hadaba walalao qofkasta oo haaraha wajiga dhibaato ka haysato waxan kula talin lahaa inaanu wax kasta iska marin, waxad arkaysaa dad odhanaya dhawr qof baa igula taliyay creams-kan somalidu iska marsato ee qaar halisa yihiin, waxad ogaataan haarahani maaha jidhkan dushiisa uun ee hoostay ka soo bilaabeen waxana baabiin kara uun wax logu tala galay ama jidhkaasoo qof yaqanaa wax u gaara ku sameeyo qofkaas oo isticmaalaya qalabkii loogu tala galay????.!!
5. Liin dhanaan oo meelaha casaanka sameeya la mariyo malintii laba jeer
Sidee Looga Hortagi Karaa Caajisnimada? Timaha Kasoo Baxa Wajiga Dumarka Burooyinka Wajiga Iyo Qoorta (Blackheads or Black Dots) Maxaa Haaraha Dawo U Ah?
Cuntooyinka Laga Qaado Kansarka